Notch ဒီဇိုင်းသစ်ပါဝင်တဲ့ OPPO R17 ဓာတ်ပုံများ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်
OPPO R17 ဆိုတဲ့ နာမည်ကို OPPO က စပွန်ဆာပေးတဲ့ မီဒီယာအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ R17 လို့ယူဆရတဲ့ OPPO ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးက TENAA မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ OPPO R17 လို့ယူဆရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ Weibo ပေါ်ကနေ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
ပထမဆုံးပုံက ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ဘက် panel ကို ပြသထားတဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံအရ bezel တွေက သေးငယ်ပြီး R15 ဖုန်းတွေနဲ့ အရွယ်တူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကကျတဲ့ ခြားနားချက်က notch ဒီဇိုင်းပါ။ ဒီဖုန်းမှာ iPhone X ပုံစံ notch အစား ချိုင့်ဝှမ်းအသေးစားတစ်ခုနဲ့တူတဲ့ notch တစ်ခုကို panel မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဒုတိယပုံကတော့ ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံမှာ ပါဝါဖွင့်ထားတဲ့ display နဲ့အတူ ဖုန်းရဲ့ထိပ်ဘက်ပိုင်းကို ပြသထားပါတယ်။ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ နေရာအနည်းသာယူတော့တဲ့ notch မှာ ကင်မရာကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
TENAA မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ထုတ်ကုန်သစ်ဟာ OPPO R17 သာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဖုန်းမှာ ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်ခုနဲ့ ကျောဘက်မှန် ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေကရော ဒီ notch ဒီဇိုင်းသစ်ကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ? လန်းသလား၊ ဂွမ်းသလား?
OPPO R17 ဆိုတဲ့ နာမညျကို OPPO က စပှနျဆာပေးတဲ့ မီဒီယာအခမျးအနားတဈခုမှာ ပထမဆုံး တှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ ရကျအနညျးငယျအကွာမှာ R17 လို့ယူဆရတဲ့ OPPO ထုတျကုနျတဈမြိုးက TENAA မှာ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ အခုအခါမှာတော့ OPPO R17 လို့ယူဆရတဲ့ ဓာတျပုံတှဟော Weibo ပျေါကနေ ပေါကျကွားထှကျပျေါလာပါတယျ။
ပထမဆုံးပုံက ဖုနျးရဲ့ အရှဘေ့ကျ panel ကို ပွသထားတဲ့ပုံ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီပုံအရ bezel တှကေ သေးငယျပွီး R15 ဖုနျးတှနေဲ့ အရှယျတူတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဓိကကတြဲ့ ခွားနားခကျြက notch ဒီဇိုငျးပါ။ ဒီဖုနျးမှာ iPhone X ပုံစံ notch အစား ခြိုငျ့ဝှမျးအသေးစားတဈခုနဲ့တူတဲ့ notch တဈခုကို panel မှာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။
ဒုတိယပုံကတော့ ရှပွေ့ေးပုံစံတဈခုဖွဈတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ အဲ့ဒီပုံမှာ ပါဝါဖှငျ့ထားတဲ့ display နဲ့အတူ ဖုနျးရဲ့ထိပျဘကျပိုငျးကို ပွသထားပါတယျ။ မွငျတှရေ့တဲ့အတိုငျးပဲ နရောအနညျးသာယူတော့တဲ့ notch မှာ ကငျမရာကို ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။
TENAA မှာ ထှကျပျေါလာတဲ့ ထုတျကုနျသဈဟာ OPPO R17 သာ ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ အဲ့ဒီဖုနျးမှာ ကြောဘကျကငျမရာနှဈခုနဲ့ ကြောဘကျမှနျ ပါဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
စာဖတျသူတှကေရော ဒီ notch ဒီဇိုငျးသဈကို ဘယျလိုမွငျပါသလဲ? လနျးသလား၊ ဂှမျးသလား?